November 12, 2019 - ThutaSone
တစ်ပတ် (၁) ကြိမ်/ (၃) ပတ် လုပ်ပေးပါဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်စေတဲ့ နည်းတဲ့
November 12, 2019 ThutaSone 0
ဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်း ရှောက်သီး (၁) လုံး ၊ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး၊ နှီး (သို့) ကြိုး (၁)ချောင်း၊ မြေအိုး (၁)လုံး။ ပြုလုပ်ပုံ ရှောက်သီးကို အလယ်မှ ခြမ်းပါ။ ခြမ်းထားသော ရှောက်သီး အတွင်းမှာ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး […]
အိမ်စောင့်နတ်၊ကိုယ်စောင့်နတ်တောင်နေမရတော့ပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးရသည့်.. ဂါထာတော်
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာလေးအကြောင်းမသိသူတွေအတွက်ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောချင်ပါတယ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်က၂၇ခေါက်ကျော်ရင်အိမ်စောင့်နတ်၊ကိုယ်စောင့်နတ်တောင်နေမရတော့ပါဘူး၊ပြိတ္တာကတော ဂါထာအစကြားတာနဲ့တစ်ချိုးတည်းလစ်ပြေးပါတယ်၊ ကျောင်းထိုင်ပြတ္တာကြီးတွေအခြားဂါထ်ာတွေပရိတ်တွေလိုက်ဆိုပြနိုင်ပေမယ်သမ္ဗုဒ္ဓေစရွတ်တာနဲ့လစ်ပြေးတာပါပဲ၊ပြေးတဲ့နောက်ကလိုက်ရွတ်၊သူကိုယ်ရောင်မဖြောက်ပြေးနိုင်ပါဘူး၊ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်တစ်နေ့တစ်ထောင်မကရွတ်ရင်နတ်တွေတိမ်ကြားမင်းတွေထက်တောင်ဘုန်းကြီးလာနိုင်ပီးစိတ်ကတောင့်တရင်သူတို့တွေကောင်းကောင်းနေမရပါဘူး၊လိုက်ဖြေစည်းပေးရပါတယ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ဟာနေမင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်၊သဲစုမကဘုရားတွေရှိခိုးရတာကြောင့်အရမ်းအစွမ်းထက်ကြောင်းအနည်းငယ်ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ မြန်မာပြန်.. (၁) သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌဝီသဉ္စ၊ ဒွါဒသဉ္စ သဟဿကေ။ ပဉ္စသတ သဟဿာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်သော ဘုရားရှင်၊ ငါးသိန်းသောဘုရား ရှင် (၅၁၂ဝ၂၈ ဆူသော ဘုရားရှင်)တို့ကို […]
အိမ်ဆောက်နေတုန်း အုတ်နီခဲ တောင်းရင် မပေးလိုက်ပါနဲ့ 
ပုဂံဆေးအမှိုက်ကောက်အလုပ်နဲ့ကျောင်းစရိတ်ရှာပြီး ဘွဲရအောင်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား
ပညာရှာပမာသူတောင်းစားဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်နေပါစေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပညာသင်ယူနိုင်တာဟာ လူတော်တွေသာလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီး ပိုက်ဆံရှာတာကလည်း ရှက်စရာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ ယခုပြသထားတဲ့ပုံထဲက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကလည်း ဘယ်သူ့ဆီကမှ အ ထောက်အပံ့အကူအညီမယူပဲ ပုံဂံဆေး နဲ့ အမှိုက်ကောက်တဲ့အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့ရပြီး ရလာတဲ့ငွေနဲ့ ကျောင်းစရိတ်ရှာက ဘွဲ့ရအောင် ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ မိဘဆင်းရဲတာကို […]
အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်နေသည့်သူခိုးကို ဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက် ရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအား ဆုငွေ ချီးမြှင့်
အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်တဲ့သူခိုးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အမျိုးသမီးကိုဆုငွေကျပ်နှစ်သိန်း ချီးမြှင့် စစ်ကိုင်းမြို့ပါရမီရပ် မဟာစည်းခုံကြီး ဘုရား အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်နေသည့်သူခိုးကို ဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက် ရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် နေ့စောင့်ဝန်ထမ်းအမျိုး သမီးအား စစ်ကိုင်းကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြီးမှ ၉ . ၁၁ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ဆုငွေ ကျပ်နှစ်သိန်းကို […]
မြန်မာငွေ ၆ သောင်း အထိ ပေးဝယ်နေရတဲ့ မြန်မာ့ ထန်းလျက်ယပ်တောင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်မယ့် သတင်းကတော့ နည်းနည်းထူးတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေ လေး ငါးရာလောက်နဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုဟာ နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာငွေ ၆ သောင်းကျော်ပေးနေရတဲ့ သတင်းလေးပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့လည်း ဒီသတင်းကို သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အညာဘက်တွေက ယက်လုပ်တဲ့ […]
ခေါင်းချွေး တအားထွက်အာရုံကြောအားနည်း ဝမ်းချုပ် မူးဝေတာတွေအတွက် ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် ဆေးနည်း
အာရုံကြောအားနည်း ခေါင်းချွေး တအားထွက် ဝမ်းချုပ် မူးဝေတာတွေအတွက် ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် ဆေးနည်း ကျွန်တော် အာရုံကြောအားနည်း ခေါင်းချွေးတအားထွက် ဝမ်းချုပ် မူးဝေတာတွေတော့ အခုဘာဆေးမှ သောက်စရာ မလိုလောက်အောင် ဒီပျားသံပရာကို လုပ်စားကြည့်လာတာ အတော်လေး အဆင်ပြေသွားပါပြီ ။ ခေါင်းချွေးများ ထွက်လာပြီဆို ဘာမှ မလုပ်ချင်လောက်အောင် […]
တလွဲ လုပ်ရာမှာ ထူးချွန်လှပါသော ရွှေမြန်မာတွေအတွက် ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူပြီ
တလွဲ လုပ်ရာမှာ ထူးချွန်လှပါသော ရွှေမြန်မာတွေအတွက်… ရွှေတိဂုံဘုရားက မိန့်တော်မူတယ်၊ “ငါ့ဆီ လာ လာ မလှူကြနဲ့၊မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီလှူဒါန်းကြ၊ငါ့ဘဝက ဘဏ်တိုးနဲ့ နေရင်တောင့် တင့်တယ်လှပြီ”တဲ့။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကလည်း မိန့်တော်မူတယ်၊ “ငါ့အနားမှာ စည်းကမ်းမဲ့နေကြမယ်ဆိုရင် မလာကြနဲ့၊ငါက အေးအေး နေချင်လို့ တောင်ပေါ်မှာ […]
တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ရသည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့တွင် ဆုတောင်းပြည့် ယတြာ
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့တွင် မဖြစ်မနေလှူပါ တနင်္ဂင်္နွေသားသမီး ရွက်လှ ၄ညွန့် သောက်တော်ရေ ၃ခွက် တနင်္လင်္င်္ာသားသမီး ပိတောက်ညွန့် ၅ညွန့် နွားနို့ ၁ခွက် အင်္ဂင်္ါသားသမီး သြဇာ ၆ညွန့် ကော်ဖီ ၁ခွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုသားသမီး ဂန္ဓမာပန်း ၇ပွင့် ကျောက်ကျော ၃တုံး ကြာသာပတေးသားသမီး အုန်း […]
ပဲ ပြုတ်ကြိုက်လို့ စားနေတဲ့သူတွေရှိလား…
ပဲပြုတ်စားခြင်း_အကျိုးကျေးဇူးများး….. ဆေးသိပ္ပံနည်းအရဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ရာ စားတော်ပဲပြုတ်ထဲတွင် လူသားတို့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ် တို့အလုံအလောက် ပါရှိပြီး၊ ဘေးဖြစ်စေတတ် သော ကိုလက်စထရောလုံးဝမပါရှိသည့် အတွက်နေ့စဉ်စားသုံးပေးသင့်သောအာဟာရဖြစ်ကြောင်း USDA (ခေါ်) အမျိုးသားအာဟာရပြု စစ်တမ်းများနှင့် WHFoods တို့မှ အခိုင် အမာထောက်ခံထားကြပါသည်။…. 1. ပဲပြုတ်ထဲတွင်အဆီဓာတ်နှင့်ကယ်လိုရီပါဝင်မှု မရှိသလောက်လွန်စွာနည်းပါးသော်လည်း၊ အာဟာရ ဓာတ်ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန် […]